Qof kastaa wuxuu leeyahay fikrado ku saabsan waxa wanaagsan ee u muuqda marka laga hadlayo eexasho - MediaLight Bias Lighting
Qof kastaa wuxuu leeyahay fikrado ku saabsan waxa wanaagsan ee u muuqda marka laga hadlayo iftiiminta eexda.
MediaLight wuxuu leeyahay heerar.
Waxaan ku dhiseynaa 'MediaLight®' qaybaha ugu tayada sareeya iyo xirfadlayaal Hollywood ah iyo dadka jecel shaneemooyinka guriga waxay ku kalsoon yihiin MediaLight heerkulka midabku isku habboon yahay (6500K, iyo si gaar ah CIE heerka iftiinka leh ee D65 "fiidiyowga caddaanka ah") iyo tusmada muujinta midabka sare (CRI) loo baahan yahay u fiirsasho midab-muhiim ah Haddii aad u baahato inaad beddesho ama aad dayactirto MediaLight-kaaga muddada 5-ta sano ee dammaanad qaadka ah, qayb kasta oo ka mid ah nidaamkaaga nalka tooska ah ee 'MediaLight' ayaa daboolaya - xitaa waxyaabaha sida dhaawaca shilka ama xatooyada.
Dammaanaddeena ayaa kafiican xitaa xitaa damaanadaha ugu ballaadhan ee aad ka heli karto alaabada kale. Sideen tan ku samaynaa? Waxaan u dhiseynaa badeecadeena inay sii socoto oo aan aaminsanahay inaad ka heli karto ugu yaraan 5 sano adeeg la isku halleyn karo MediaLight-kaaga. Waxaan u baahanahay in alaab-qeybiyeyaashu ay gadaal ka istaagaan qeybahooda sidoo kale. Haddii aan bedelno qayb, dib ayey noogu soo celiyaan.
Sawir loo adeegsaday ogolaanshaha David Abrams ee Avical.com
Heerarka warshaduhu waxay ku baaqayaan nal eex ka dambeeya muuqaalka, iyo awoodda iftiinka sare ee HDR, waa ka muhiimsan tahay sidii hore si loola dagaallamo daalka indhaha. Nidaamka 'MediaLight' wuxuu siiyaa xalka ugu fiican daawadayaasha indha indheynta leh, yareynta daalka indhaha, hagaajinta isbarbar yaaca la dareemayo, iyo kor u qaadida khibrada daawadayaasha. Kaliya maahan inaan macaamiishayada kula talinno MediaLight, laakiin waa waxa aan shakhsi ahaan ugu isticmaalo gurigeyga. "
MediaLight waa hab lagu jees jeeso si macquul ah oo looga faa'iideysan karo bandhiggaaga. Kuwani maaha isku mid alaab raqiis ah oo loo yaqaan 'LED strips' oo aad ka heli karto boggaga kale, ama nalalka midabbada beddelaya ee aan awood u lahayn soo saarista fiidiyow run ah oo cad.
Waxaan u sameeynaa alaab nal-nacayb heer-xirfadeed ah annaga oo u keeneyna qiime aad uga wanaagsan lacagtaada.
Waxaan kuxiraneynaa midkeenna midabka leh™ Chips-ka SMD (dusha sare ee qalabka kor u qaadida LED-yada) si loo tijaabiyo adag ka hor inta aan loo iibinin naxaasta PCB si loo helo kuleyl aad u sarreeya, waxaana ku darnaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay xirmada runta ah "xalka sanduuqa."
Qalab looma baahna (marka laga reebo maqaska, haddii aad xargaha u goyneyso cabir yar) waadna ku farxi doontaa inaad ogaato in MediaLight ay ka qiimo yar tahay xalka DIY halka aad siineyso CRI heer sare ah, heerkulka midabka iyo awood qeybsiga awooda. (Waxaan ku bilownay DIYers, marka waxaan dareemeynaa xanuunkaaga!).
Si ka duwan noocyada kale ee loo yaqaan 'LED strips', nidaamka nalka nacaybku wuxuu bixiyaa:
Heerkulka midabka D65 / 6500K mid aad u saxan (CCT)
Si gaar ah CRI sare (98-99 Ra loogu talagalay MediaLight Mk2 iyo MediaLight Pro, siday u kala horreeyaan)
5 Sano Garanti Xaddidan (haddii aan la dayactiri karin, waan beddeli doonnaa)
Waxaa kujira-sanduuqa 50-joogsi / 2% -sameeyaha PWM dimmer
Waxaa ka mid ah kontoroolka fog ee infrared-ka la shaqeeya meelaha fog-fog ee caalamiga ah iyo xarumaha IR-karti u leh (Eclipse waxaa ka mid ah muraayad desktop ah halkii laga isticmaali lahaa fog)
Laydhadh waaweyn oo dhalaalaya oo 50% ka badan mitir ka badan inta badan xariijimaha
Copper PCB si loo sii daayo kuleylka iyo nolosha dheer
VHB-xoog badan oo leh 3M taageero koollo
Wax Su'aalo Ah Lama Weydiinayo Soo Celinta Lacageed ee 45-maalmood ah iyo Soo Celinta ama is-weydaarsiga (Amarada Mareykanka ee websaydhkayaga USA).
Shahaado ka helay Aasaaska Sayniska Sawirka
Waxaa lagu soo dhaweeyay Stacey Spears
Ansixiyay By David Abrams ee Avical
Haddii macluumaadkani adiga yahay mumbo-jumbo, qaadashada ayaa ah in The MediaLight uu yahay nalka eexasho ee xulashada istuudiyooyinka sare ee Hollywood, filim sameeyeyaasha, dadka jecel masraxa guriga, cayaartoyda, iyo taageerayaasha isboortiga.
Ansixinta ugu muhiimsan waa ereyga afka macaamiisheenna kuwaas oo ka dhigay wax soo saarkeenna mid ka sii wanaagsan iyada oo loo marayo talo soo jeedinta qaababka cusub sannadihii la soo dhaafay. Hubso inaad aqriso dib u eegista oo aad iska hubiso shirarka internetka.
Waxaan ku soo darnaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay rakibo tayo-xirfadeed ah sanduuqa, haddii ay jiraan wax aynaan ka fileynin, nala soo socodsii. Waxaan ku dadaali doonnaa inaan ku xallinno xaaladdaada gaarka ah adoo adeegsanaya emayl, wadahadal ama wicitaan fiidiyoow.
Dhamaan khadadka wax soo saarka ee MediaLight, laga bilaabo $ 32 MediaLight Mk2 Eclipse ilaa nidaamyadeena waaweyn, waxaa cadeeyay The Aasaaska Sayniska Sawirka (ISF) oo ay ku kalsoon yihiin dadka hiwaayadda u ah shineemooyinka guriga iyo sidoo kale xirfadleyda filimka iyo baahinta. Sababta kaliya ee hal nooc looga doorto mid kale ayaa ah in lagu habboonaado TV-gaaga oo la fuulo.